Lacagta hawlgabka marka aad deggan dalka Iswiidan dibeddeeda | Pensionsmyndigheten
Lacagta hawlgabka marka aad deggan dalka Iswiidan dibeddeeda
Haddii aad soo degganayd oo ka soo shaqayn jirtey dalka Iswiidan , waxaad xaq u leedahay in aad dalka Iswiidan ka hesho lacagta hawlgabka guud, xataa haddii aad deggan tahay dal kale. Mana u baahnid inaad haysato dhalashada iswiidhishka.
Waxaa lacagaha hawlgabka lagugu siinayaa dal kasta oo aad u guurto. Laakiin lacagta hawlgabka oo maalgelinta lagu sameeyo waxaa heli kartaa haddii aad dalka Iswiidan ka soo shaqaysay intii ka dambeysey 1994. Lacagta hawlgabka asaasiga ah waxaa lagugu siinayaa oo qura haddii aad u guurto dal ka mid ah Midowga Yurub (MY) ama dal ka mid ah EES (EES waxaa ku bahoobay dalalka Midowga Yurub iyo Norway, Iceland iyo Liechtenstein) ama Switzerland ama mararka qaarkood Kanada.
Haddii adigoo horay uga soo shaqeeyey dalka Iswiidan aad geeriyooto, waxaa lacagtaada hawlgabka xaq u yeelanaaya qofka aad isqabtaan ama carruurtaada.
Soo beddel adreeska aad ku leedahay dalka dibeddiisa
Haddii aad u guurto dal kale, waa in aad soo sheegtaa adreeskaaga cusub. Waxaa muhiim ah in hay´adda Pensionsmyndigheten ay haysato adreeskaaga cusub si ay ugu suurtagasho in ay soo diraan warqadaha lacag-bixinta iyo caddaynta inaad nooshahay.
Ku soo dir adreeskaaga cusub iyo lambarkaaga aqoonsiga warqad aad soo saxiixday kuna soo hagaaji:
Caddaynta noolaanshaha waxa weeye hab aad noogu caddeyneyso in aad weli nooshahay. Taasna waxaa laga rabaa qofka qaata lacagta hawlgabka guud ama lacagta dhaxalka hawlgabka oo ka heli hay´adda Pensionsmyndigheten amase Xafiiska caymiska bulshada ka qaata lacagta bukaanka, lacagta tababarka shaqada ama lacagta dhaawaca shaqada.
Waxaan dayr walba dalka aad deggan tahay kuugu soo direynaa caddaynta noolaanshaha haddii aysan hay´adaha hay´adda Pensionsmyndigheten ama Försäkringskassan toos uga helin dalkaas. Caddaynta noolanshaha waa in ay kuu oggolaatay mid ka mid ah hay´adaha hoos ku qoran:
Machadka caymiska bulshada ee dalalka kale
Boliiska dalka aad deggan tahay
Xafiiska diiwaanka guud ee dadweynaha dalka aad deggan tahay
Haddii aad dalka Iswiidan ku sugan tahay, waxaad la xiriiri kartaa xafiisyada adeegga bulshada ee hay´adda Pensionsmyndigheten ama Försäkringskassan. Waxaad caddaynta u direysaa:
Aad bey muhiim u tahay inaa ku qortid lambarkaada aqoonsiga oo iswiidhishka. Xasuusnow in foomka uu qofkale marqaati ka ahaado iyo uu soo saxiixo iyo inaa adiga xitaa soo saxiixdid foomka. Adiga ma ubaahnid inaa foomka asalka noogu soo dirtid xitaa bostada haddii aad e-mailka noogu soo dirtay.
Read about life certificate in English
Vi skickar varje höst ut ett levnadsintyg till dig som bor i ett land som Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan inte automatiskt får uppgifter från. Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något/någon av följande:
Läs mer om levnadsintyg